Kugadzirisa Kwamungaita Matambudziko | Mhuri Inofara
“Dananai kwazvo, nokuti rudo runofukidza zvivi zvizhinji.”—1 Petro 4:8
Iwe nemumwe wako sezvamunotanga kugara pamwe chete, pachamuka matambudziko akasiyana-siyana. Angakonzerwa nekusiyana kwakaita mafungiro nemanzwiro enyu uye maitiro amunoita zvinhu nemhaka yemarererwe amakaitwa. Kana kuti matambudziko angakonzerwa nevamwe vanhu uye nezviitiko zvisingatarisirwi.
Unganzwa uchida kudzivisa kuona zvinhu sezvazviri, asi Bhaibheri rinotiudza kuti titarisane nematambudziko edu. (Mateu 5:23, 24) Uchaona kuti kushandisa zvinotaurwa neBhaibheri ndiwo mushonga unonyatsoshanda pakugadzirisa matambudziko enyu.
1 KURUKURAI DAMBUDZIKO RACHO
ZVINOTAURWA NEBHAIBHERI: ‘Pane nguva yokutaura.’ (Muparidzi 3:1, 7) Iva nechokwadi chokuti manyatsokurukura nezvedambudziko racho. Budira mumwe wako pachena nezvemanzwiro aunoita uye zvaunofunga nezvenyaya yacho. Gara ‘uchitaura chokwadi’ nemumwe wako. (VaEfeso 4:25) Kunyange ukagumbuka, dzivisa kupopota. Mhinduro nyoro inogona kuita kuti nyaya inofanira kunge iri diki irege kuguma yakora muto.—Zvirevo 15:4; 26:20.
Kunyange usingabvumirani nemumwe wako, ramba uchitaura nenyasha, usingambokanganwi kumuratidza rudo neruremekedzo. (VaKorose 4:6) Edzai kukurumidza kugadzirisa nyaya yacho, uye musarega kutaura mose.—VaEfeso 4:26.
Sarudzai nguva yakakodzera yokukurukura dambudziko racho
Kana iri nguva yokuti uteerere, dzivisa kapfungwa kekuda kudamburira mumwe wako. Uchawana mukana wako wokutaura
2 TEERERA UNZWISISE
ZVINOTAURWA NEBHAIBHERI: “Pakudanana sehama, dananai kwazvo. Pakukudzana, tungamiriranai.” (VaRoma 12:10) Mateerere aunoita anokosha zvikuru. Edza kunzwisisa maonero emumwe wako ‘uchinzwira ngoni uye uchizvininipisa.’ (1 Petro 3:8; Jakobho 1:19) Usangonyepera kunge uri kuteerera. Pazvinenge zvichiita, chimbosiya zvauri kuita uteerere mumwe wako, kana kuti bvunza kana zvingaita kuti muzozvikurukura pane imwe nguva. Kana ukafunga nezvewawakaroorana naye semunhu anoda kukubatsira pane kumuona semuvengi wako, ‘hauzokurumidzi kugumbuka.’—Muparidzi 7:9.
Ramba uchiteerera uchida kunzwawo zvinotaurwa nemumwe wako, kunyange kana zvauri kunzwa zvisingakufadzi
Nzwisisa zvaari kuda kuedza kutaura. Cherechedza zvaanoita chiso chake nemuviri wake uye matauriro aanenge achiita
3 ONAI KUTI MURI KUITA ZVAMAKASARUDZA
ZVINOTAURWA NEBHAIBHERI: “Kushanda zvakaoma kwose kune zvakunobatsira, asi kungotaura nemiromo kunoita kuti pave nokushayiwa.” (Zvirevo 14:23) Kubvumirana kuti uyu ndiwo mushonga unogadzirisa dambudziko hakuna kukwana. Munofanira kuona kuti muri kuita zvamakasarudza. Izvi zvingada kushanda nesimba, asi zvinenge zvakakodzera kuti mudaro. (Zvirevo 10:4) Kana mukashandira pamwe, muchawana “mubayiro wakanaka” pabasa renyu rakaoma.—Muparidzi 4:9.
Sarudzai kuti ndezvipi zvinoshanda zvichaitwa nemumwe nemumwe kuti mugadzirise dambudziko renyu
Garai muchiongorora kubudirira kwamuri kuita
GADZIRISAI MATAMBUDZIKO PAMWE CHETE
Mukashandira pamwe, munogona kuita kuti wanano yenyu ive yakasimba uye inofadza. (Zvirevo 24:3) Fungai nezveramangwana, uye musamutsa matambudziko akapfuura. (Zvirevo 17:9) Pamunoshandira pamwe nemumwe wako moshandisa zvinotaurwa neBhaibheri, munogona kubudirira pakugadzirisa chero dambudziko.
Idambudziko ripi rinoda kukurumidza kugadziriswa randinoda kukurukura nemumwe wangu?
Zvii zvandingaita kuti ndinzwisise manzwiro anonyatsoita mumwe wangu nezvedambudziko racho?
Kudzokorora zvataurwa kuratidza kuti wazvinzwa, hunotova unyanzvi asi chinokosha zvinoratidza kuti une rudo. Ona kuti ungavandudza sei kuteerera kwaunoita.
Zvii zvamungaita kana imba yenyu yava kukanganiswa nekukandana kwamunoita mashoko anorwadza?
Chii chinoita kuti vamwe vakaroorana vasvike pakusataudzana, uye vangagadzirisa sei dambudziko iroro?